Akpa laptọọpụ laptọọpụ maka ụmụ nwanyị: Nhọrọ 15 maka ndị njem, ndị njem na ndị ọzọ - Ụdị
Akpa laptọọpụ kacha mma maka ụmụ nwanyị mara mma ma mara mma
Nye ubu gị ezumike.
Ka ị na -arụ ọrụ site na ebe ọ bụla na -ada ụda nke ọma ụbọchị ndị a, ịwepụ laptọọpụ gị n'ime akpa ọrụ njikere gị nwere ike ịdị ka nke ọma, schlep. Akpa akpa laptọọpụ maka ụmụ nwanyị nwere ike ịbịaru aka-ịghara ikwu maka ijere chi dị gị nso-ma ị na-akwakọba ohere ọrụ ọhụrụ, idebanye aha n'ụlọ akwụkwọ n'oge mgbụsị akwụkwọ, ma ọ bụ laghachi azụ n'ọfịs n'oge adịghị anya.
Emebere akpa ndị a ka ijide laptọọpụ, site na kọmpụta ochie nke anụ ọhịa iri na abụọ nke ị nwetagoro kemgbe mahadum ruo akara ọhụrụ na-agbatị MacBook Pro nke anụ ọhịa iri na ise. N'adịghị ka obere akpa ma ọ bụ akpa tote gị, nke na -etinye ibu niile n'otu ubu, inwe akpa nwere oghere laptọọpụ raara onwe ya nye - yana eriri ubu iji mee ka ịdị arọ dịrị - nwere ike inyere gị aka idobe nhazi gị wee gbochie ọnya ọ bụla fọdụrụ na -esote. ụbọchị.
Akpa laptọọpụ laptọọpụ bụkwa ezigbo ọrụ ọrụ. Na mgbakwunye na ịbụ akpa a na -arụ ọrụ, ha na -enwu ọkụ dị ka akpa azụ njem, yana ngalaba na -agbasawanye iji nabata ihe ọ bụla ịchọrọ n'okporo ụzọ (chee chaja, ihe nhicha aka, akwụkwọ - ị ga -enweta foto). Ị nwere ike ịhụ akpa laptọọpụ nwere akwa na-egbochi mmiri, atụmatụ izu ohi, yana ọdụ ụgbọ mmiri USB (!) Iji mee ka ekwentị gị jupụta.
Mana ọ bụghị naanị ọrụ niile - ị ga -ahụkwa ụdị ebe a. Ị nwere ike ịchọta akpa akpa laptọọpụ akpụkpọ anụ ma ọ bụ faux-akpụkpọ anụ maka nlele mara mma karịa, ma ọ bụ obere akpa obere akpa akwa na-arụ ọrụ abụọ dị ka ihe na-ebu (ma ọ bụ ọbụna akpa akpa). Anyị nyochara ndị na-ere ihe kacha mma na obere akpa laptọọpụ dị n'okpuru ụmụ nwanyị iji nyere gị aka ịchọta nke zuru oke maka gị.
Site n'ikike ika 1/15
Akpa obere akpa Dagne Dover Dakota
Mara mma nke ukwuu ka ọ bụrụ ngwugwu ụbọchị gị mana ọ ga-adịte aka iji rụọ ọrụ dị ka akpa akpa njem gị, ọnụ ọgụgụ neoprene a siri ike nwere akpa laptọọpụ raara onwe ya nye na akpa n'akụkụ iji tinye dongles na ụdọ gị niile.
ogologo ụkwụ jeans na akpụkpọ ụkwụ
$ 175 $ 105 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 2/15
Nọmba akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ camo a pụtara ọ bụghị naanị maka ọmarịcha hue na amị amị, silhouette na-enweghị frills, kamakwa maka uwe laptọọpụ dị na ngalaba. Ọzọkwa, ọ nwere ike dabara ọnụ ahịa dị ịtụnanya n'ime.
$ 115 $ 70 Zappos Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 3/15
Akpa laptọọpụ Calpak Kaya
Otu n'ime akpa akpa laptọọpụ ụmụ nwanyị kacha atọ ụtọ nke anyị hụtụrụla, ọ sara mbara nke ukwuu iji nwee laptọọpụ 15-inch na-ekele maka aka siri ike n'elu-ọ nwere ike okpukpu abụọ dị ka akpa tote.
cute ntu aghụghọ n'ihi na Krismas
$ 118 Calpak Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 4/15
Akpa laptọọpụ Kroser
Enwere ike eyi ngwakọ akpa akpa a na-agbanwe agbanwe dị ka akpa ubu dabere na ihe dị n'ime-nke nwere ike ịdị iche, ebe ọ nwere ike idowe ma laptọọpụ 15.6 inch na mbadamba. (Akpa n'ihu na -ejigide ibe na bobs, dị ka obere ntị ntị nke gaara efunahụ.
$ 43 $ 28 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 5/15
Akpa njem na akpa diaper, akpa azụ Fjällräven Kanken na-egosipụta akwa mmiri na-asọ oyi ka ọ hụ gị site n'oge udu mmiri dara na udu mmiri. Agbanyeghị, akụkụ kachasị mma bụ oche oche mbughari (?!) Nke na -azọpụta buttị gị ka ọ ghara ịda mba ma ị nọ n'ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ egwuregwu bọọlụ nwa gị. (Ọ dịkwa mma maka nkwado azụ, ọ bụrụ na ị na -arụ ọrụ na akpa akwụkwọ ụlọ juru na akwụkwọ ọgụgụ.)
Site n'ikike ika 6/15
Akpa laptọọpụ Modoker Vintage Vintage
Akpa azụ a buru ibu nwere ike ijide ihe niile site na akwụkwọ ọgụgụ gaa na laptọọpụ na mgbanwe uwe - ọ bụrụ na ịgaghị ebugharị akwa mgbatị ahụ dị iche - mana ejiri nylon mee ya, nke na -eme ka ọ dị fechaa. na mmiri na-asọ oyi. Akpa akụkụ dị obosara nke dabara na karama mmiri, na ọdụ ụgbọ USB arụnyere pụtara na ị gaghị agakwa na ọnọdụ ike dị ala ọzọ.
$ 36 Amazon Zụta ugbu a
ọmarịcha agba agba tupu na mgbe ọ gachara
Site n'ikike ika 7/15
Akpa paaki Athleta Kinetic
Ma ị na -achọ azu paaki laptọọpụ njem ogologo izu ụka ma ọ bụ akpa mgbatị ahụ nke gafere ma gafee, nke a na -anapụta. Akwa na-emegharị nylon na-akpọnwụ ngwa ngwa-nnukwu mgbakwunye ma ọ bụrụ na mmiri ozuzo jide gị-ọ na-abịa na akpa uzuzu maka akpụkpọ ụkwụ na ihe mkpuchi mkpuchi raara onwe ya nye.
$ 139 $ 90 Onye egwuregwu Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 8/15
Tory Burch Piper Gingham Zip akpa
Icheta akpa akwụkwọ Jansport ochie ahụ, belụsọ na enwere ọmarịcha mmetụta, nọmba Tory Burch a na-ahụ anya nwere laptọọpụ anụ ọhịa 13 nwere ohere ịchekwa.
$ 298 $ 209 Tory Burch Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 9/15
Akpa akpa Lululemon kwa ụbọchị 2.0
Ejiri akwa na-egbochi mmiri mee ya, ọnụ ọgụgụ a pere mpe nwere nnukwu akpa na nke dị n'ime, na-eme ka ọ dị mma maka ụdị ụdị A nke dị n'etiti anyị.
$ 98 Lululemon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 10/15
The (Re) sitere n'akpa azụ dị na agụ owuru
Kedu ihe na -eme nke a ezigbo akpa akpa laptọọpụ njem? Ọ pụtara na igwe mmadụ, na-ekwe nkwa na ị gaghị echefu ya na nnukwu akpa, yana uwe mwụda trolley na azụ ka ị nwee ike ịdụnye ya na akpa akpa gị.
$ 138 $ 119 Madewell Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 11/15
Akpa akpa Tumi
Ọ bụrụ na ị bụ WFH si ebe ọzọ, arahụla na akpa a mara mma, nke nwere aka iji dobe laptọọpụ gị, iPad na ihe ndị ọzọ ga-enwerịrị.
$ 295 Ụlọ ahịa Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 12/15
Akpụkpọ Akpụkpọ anụ Paravel na akpa akpa Grosgrain-Trimmed Shell
Ọbụghị naanị na ọ na -ele anya nke ukwuu, mana enwere ihe karịrị ebe a. A na-eji karama mmiri plastik emegharịrị akpa a akpacha ajị anụ ahụ-na-etinye plastik ahụ na-eji arụ ọrụ-ọ nwekwara ike tụba n'ime obere akpa maka nchekwa dị mfe.
$ 65 Net-a-Porter Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 13/15
Travelon Addison Anti-ezu ohi azu paaki
Ọ bụ ezie na akpa azụ okooko osisi a dị n'akụkụ nke pere mpe-ịnabata laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba 13 nke anụ ọhịa-ọ na-akwụ ụgwọ maka nchekwa. Ọ nwere akpa ekwentị ekwentị raara onwe ya nye, akpa RFID na -echebe kaadị kredit na paspọtụ site na nyocha RFID, mkpọchi mkpọchi nwere ike kpọchie, eriri iji dobe ya na tebụl ma ọ bụ oche, na ụlọ na-eguzogide slash maka eriri na akụkụ nke mbụ.
$ 80 $ 65 Amazon Zụta ugbu a
Site n'ikike ika 14/15
Akpa laptọọpụ Ytonet
Nke a dị ka - ọ bụ n'ezie - obere akpa azụ siri ike, na -eme ka ọ dị mma maka njem dịka ọ dị maka njem. Ị ga-ahụ ọdụ ụgbọ USB iji chajịa ekwentị gị ma ọ bụ laptọọpụ, akpa RFID, ohere zuru oke maka laptọọpụ 15.6 inch, yana ọbụna oghere zoro ezo maka ezigbo ihe dị mkpa dị ka paspọtụ gị. Ma, dị ka otu onye na -enyocha Amazon tinye ya: Ịhụnanya, ịhụnanya, hụ akpa a n'anya! Were ya na njem izu ụka gara aga. Ọ na -ejide nke ukwuu. Akpa ahụ dịkwa nfe nke na ọbụlagodi ihe m niile dị n'ime ya, ọ baghị arọ.
ihe na-eme a nwaanyị obi na-adị mgbe mmadụ ga-emetụ ya n'obi
Site n'ikike ika 15/15
Akpa akpa MZ Wallace Metro
Atụla aghụghọ - nke a nwere ike lee pere mpe, mana o zuru oke iji dabara laptọọpụ 15, mbadamba, na ngwa ndị ọzọ. Akpa n'ihu na-abịa na obere akpa iji chekwaa ekwentị gị, enwerekwa ọbụna onye nwere kaadị akwụnyere n'ime azụ maka kaadị kredit gị na ID, ọ bụrụ na ịchọghị iburu obere akpa gị. Amamihe? Ee. Mara mma? Ọzọkwa ee.
$ 245 Nordstrom Zụta ugbu a
esi eme ka ọnyá gbakee ngwa ngwa
agwọ na nrọ ihe ọ pụtara
nkwado n'akụkụ ịkwalite bra
achọghị m ịma maka gị